राजनीतिको बदलिँदो एजेन्डा
भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता जुजाना कापुटोवा १ अप्रिल २०१९ मा स्लोभाकियाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् । उनी देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिसमेत हुन् । राजनीतिको खासै अनुभव नभएकी कापुटोवाले भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डाकै कारण मार्कोस सेफ्कोविकलाई पराजित गरिन् । कापुटोवाले ५८ प्रतिशत मत प्राप्त गरिन् भने प्रतिद्वन्द्वी सेफ्कोविकले ४२ प्रतिशत मत पाए ।
सन् २०१९ मै पेरुका प्रधानमन्त्री सेजार भिल्लानुभावले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । सेजार पहिलोपटक सन् २०१३ देखि २०१४ सम्म दुई वर्ष प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसैगरी, सन् २०१८ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन स्थापना गर्न नसकेको भनी चौतर्फी आलोचना भएको थियो । देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्पष्ट र ठोस कदम चाल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खाली गरिदिए ।
सन् २०१९ अप्रिलको अन्तिम साता ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति मिसेल टेमेअरले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । टेमेअरले अदालतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको फैसला गरेलगत्तै प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । टेमेअरमाथि भ्रष्टाचारी समूहको नेतृत्व गरेको आरोप पनि लागेको थियो । भ्रष्टाचारकै अभियोगमा उनी गत मार्चमा पक्राउ परेका थिए । यद्यपि, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत उनी प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएका थिए । तर, अदालतले उनीमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर गरेसँगै उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनको कार्यकाल गत वर्ष मात्रै सकिएको थियो ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्, जसले कसरी राजनीतिको केन्द्रमा कुशासन तथा भ्रष्टाचारको मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न सहयोग गर्छ । राज्य सत्ता चलाउने राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारको चास्नीमा सुधार गर्नै नसक्ने गरी अल्झिँदा नागरिकले वैकल्पिक बाटो समात्न थालेका छन् । अर्थात्, कुनै बेला वाद र दर्शनको आधारमा हुने राजनीति अब विस्तारै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दातर्फ सरेको छ ।
लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हँुदै गएका राजनीतिक दलले विस्तारै जनमत तथा जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन् । मतदाता तथा नागरिकलाई समाजवाद वा साम्यवाद वा पुँजीवाद वा अन्य वादमा भुलाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने राजनीतिक चरित्र विस्तारै ओझेल पर्दै जान थालेको छ । बरु सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुद्दा तथा सवालमा राजनीतिक दलको एजेन्डा तथा रणनीति हेर्दै मतदान गर्ने सचेत मतदाताको संख्या संसारभर बढ्न थालेको छ । भर्खरै युक्रेनमा भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाएका हास्यकलाकार भोलोडिमर जेलेन्स्कीलाई २२ २०१९ अप्रिलमा नागरिकले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरे । नागरिकले कुनै वाद वा दर्शनलाई नभई सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेन्डामा मतदान गरेका थिए ।
नजिकैको पाकिस्तानलाई नै हेरौं । गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका क्रिकेटर इमरान खानले भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेन्डा समातेर २०१८ जुलाईमा चुनाव जिते । उनले पहिलो बजेट पेस गर्दै ११ जुन २०१९ मा देशको नाममा सम्बोधन गरेका थिए । जसमा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध हाइ लेभल कमिसन गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । इमरानका अनुसार मनि लाउन्ड्रिङमार्फत राजनीतिज्ञ नवाज सरिफ र भुट्टो परिवारले १० वर्षभित्र देशको २४ हजार अर्ब रुपैयाँ लुटेको आरोप लगाएका छन् । भ्रष्टाचारकै मुद्दामा दोषी ठहर भई पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ जेलमा छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति आसिफ जरदारीलाई नक्कली बैंक खाता बनाएर मनि लाउन्ड्रिङ गरेको आरोपमा पाकिस्तानको अदालतमा केही साताअघि जेल सजाय तोकिएको छ । यसबाट देखिन्छ, पाकिस्तानको राजनीति वाद र दर्शनलाई छाडेर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डातर्फ अघि बढेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारले आकाश छुन लागिसकेको छ । वाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड, एनसेल काण्ड, सांसद विकास कोषको रकममा भएको भ्रष्टाचार काण्ड, सरकारी जग्गा अतिक्रमण काण्ड, साउदीमा हज यात्री पठाउँदा भएको भ्रष्टाचार काण्ड, मालपोत काण्डलगायतका काण्ड एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका ठूला ठूला घटना सार्वजनिक भइरहँदा र त्यसमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताको संलग्नता भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहँदा नागरिकमा वर्तमान राजनीतिक दल तथा तिनको नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढेर गएको छ ।
एक विपन्न मुसहरको बच्चाका लागि छात्रवृत्तिका लागि विनियोजित बजेटमा शिक्षक भ्रष्टाचार गर्छन् । गरिब विपन्न, असक्त, दलित, जनजाति तथा अन्यको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न निःशुल्क औषधिका लागि विनियोजित बजेटमा अहेब तथा स्वास्थ्यकर्मी अनियमितता गर्छन् । कुलो, पाटी पौवा, सडक, सिँचाइलगायतका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र इन्जिनियर भ्रष्टाचार गर्छन् । जग्गा पास गर्न जाँदा मालपोतमा, कित्ताकाट गर्न जाँदा नापीमा, ऋण झिक्न जाँदा बैंकमा घुस तथा अतिरिक्त पैसा नदिई नागरिकको काम नै हुँदैन । प्रदेश तथा संघीय तहमा यस्तो भ्रष्टाचारको आकार ठूलो छ, प्रकृति घुमाउरो छ । जुन सुकै काममा पनि नेपालमा घुस नदिई कामै नहुने अवस्था बनेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हो । यो कुरालाई पेरुका प्रधानमन्त्रीले बुझेर आफ्नो नालायकीपनको कारण राजीनामा दिए । नेपालका कार्यकारी प्रमुख भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्नेमा समेत सचेत नभएका हुन् कि जस्तो लाग्छ । कतिपय घटनामा आफैं न्यायाधीश बनेर अमुक व्यक्तिलाई निर्दोष वा दोषी करार गर्न व्यस्त छन् । अनि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो भन्दै पन्छिन्छन् । आफ्नै नाकको डाँडीमा भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नदेखेझंै गर्छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन स्थापनाको नीति निर्माण गर्नुपर्ने सांसद ६ करोड रुपैयाँको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च र पुँजीगत खर्चको १० प्रतिशत कमिसन लिन व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा सरकार बेल्चाले मकै गोडेको वा झार उखेल्न कार्यकर्तालाई राज्यकोषको दोहन गर्दै पैसा बाँडिरहेको छ । जनप्रतिनिधि प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्दै अनियमित ढंगबाट रकम असुल्न क्रियाशील छन् । गाउँपालिकाको बजेटमा सिनेमा बनाएर अध्यक्ष नायक बनेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र उस्तै छ । समग्रमा नेपालको हरेक संरचना तथा संयन्त्र भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्था के नेपाली थाहा पाएका छैनन् होला ? के उनीहरू यसलाई त्यतिकै बेवास्ता गरेर बसिरहेका होलान् ? पछिल्लो समय अविकासको कारण सुशासनको अभाव हो भन्ने तथ्य स्थापित हँुदै गइरहेको छ । २१आंै शताब्दीका सचेत नेपाली नागरिक यसबाट अनभिज्ञ होलान् ? पक्कै पनि छैनन् । राजनीतिक दल तथा तिनका नेता चाहे सत्ता पक्ष हुन् वा प्रतिपक्ष त्यसलाई नागरिकले नजिकैबाट नियालिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रको बदमासीलाई अनुभव गरिरहेका छन् । उकुसमुकुस बढ्दै गइरहेको छ ।
देश कंगाल हुँदै गइरहँदा राजनीतिक दलका नेता तथा प्रशासक मोटाउँदै गइरहेको अनुभव गरिएको छ । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनामा तत्काल ठोस कदम चाल्न नसक्ने हो भने अहिलेको नेतृत्वको विकल्प खोज्नेछन् । जसरी स्लोभाकिया र युक्रेनमा खोजे । सरकारको मात्र होइन, वर्तमान राजनीतिक दलहरूकै विकल्प खोज्ने बाटोमा नागरिक अगाडि बढ्नेछन् । जसरी पाकिस्तानमा खोजे ।
त्यसले पनि समाधान दिने अवस्था नदेखेमा अहिलेको शासन प्रणालीकै विकल्प खोज्न पनि सक्छन् त्यसैले बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार नेपाली नागरिकको चासो र सरोकारलाई ध्यान दिँदै सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । अन्यथा डरलाग्दो ‘सुनामी’ आउन सक्छ । चेतना भया ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ९, २०७६, ०१:४३:००
दुर्घटनाका नाममा सामूहिक हत्या !
के अमेरिका सुरक्षित छ ?
दुई तिहाइको लाचार सरकार !
अमेरिकाको नारकीय यात्रा
सामाजिक सुरक्षा र वृद्ध भत्ता
लौन ! अब त सुधाराैं